Madaxii Hore Ee Sirdoonka Israel Oo Qirtay Inuu Xiriir la Lahaa Iran – Heemaal News Network
Madaxii Hore Ee Sirdoonka Israel Oo Qirtay Inuu Xiriir la Lahaa Iran
Madaxa sirdoonka Israel ee Mossad ee xilka ka degaya ayaa sameeyey qirashadii ugu dhoweyd oo ah in dalkiisa uu ka dambeeyey weeraro dhowaanahan lagu qaaday Nukliyeerka Iran iyo saynisyahano militari.
Yosi Cohen oo la hadlay barnaamijka daba-galka ee “Uvda” oo ka baxa taleefishinka Channel 12 ee dalkaas ayaa bixiyey qirasho aan caadi aheyn oo aan laga fileyn madaxa hay’ad sirdoon.
Hadalladiisa ayaa sidoo kale diginin cad u diray saynisyahanad Nukliyeerka Iran, oo ah in sidoo kale ay noqon karaan bartilmaameedka khaarijin.
“Haddii syanisyahanada ay doonayaan inay shaqadooda beddelaan, oo aysan na waxyeeleyneyn, haa, waxaan u yabooheynaa hab ay uga baxaan,” ayuu yiri Cohen.
Weeraradii ugu weyna ee Iran lagu qaado, ayaa laba ka mid ah, waxay ka dhaceen xarunta Natanz, halkaasi dhulka hoostiisa lagu kobciyo macdanta uranium-ka, si looga hortago in la weeraro.
Bishii July 2020, waxa uu qarax kala dhantaalay mashiinada loo adeegsado uranium-ka, waxayna weerarkaas Iran ku eedeysay Israel. Sidoo kale bishii April ee sanadkan ayaa waxaa isla xaruntaas ka dhacay qarax kale oo saameeyey hoolalka lagu kobciyo macdanta uranium-ka.
“Mashiinada Centrifuge-ka halkaas ayey ku shaqeyn jireen,” ayuu yiri. “ooh adda ma shaqeeyaan miyaa,” ayey weydiisay weriye Ilhan Dayan, wuxuuna ka jawaabay “dhab ahaantii.
Cohen si toos ah uma qiran weerarka, hase yeeshee wuxuu yaboohay qirashadii ugu dhoweyd ee ah in Israel ay ku lug laheyd weerarada.
Barnaamijka Uvda ayaa sidoo kale ka hadlay dilkii November loo gaystay saynisyahan qeyb ka ahaa billowga barnaamijka Nukliyeerka Iran oo lagu magacaabay Mohsen Fakhrizadeh, wuxuuna sheegay in Cohen uu saxiixay dilkaas.
Cohen ayaa ugu baaqay saynisyahanada Iran inay faraha kala baxaan barnaamijka Nukliyeerka, waxaana mar la weydiiyey waxa dhacaya haddii aysan sidaas sameyn uu ku jawaabay “way arkeen saaxiibadood,” isaga oo ula jeeda kuwa la dilay.
Amoud Foundation Oo Deeq Raashina Gaadhsiisey 200 Qoys Danyarta Ku Nool Borama Iyo Faraweyne.
Musharaxiinta Oo ka Hor-yimid Guddi Uu RW Rooble U Magacaabay Dhalinyarii loo Qaaday Eritrea.(Akhriso)
Dagaal Maanta Mar kale ka Dhex-qarxay Somalida Iyo Canfarta Oo ka Socda Gobolka Siti
Heemaall April 6, 2021 April 6, 2021
Akhriso:-Qodobada la Isku Mari-waayay Shirkii Afisyooni iyo kuwa la Isla Fahmay
Talaalka Covid 19 Ee Uu soo Saaray Shiinaha Oo Muqdisho soo Gaaray.(Sawiro)
Heemaall April 11, 2021 April 11, 2021